RIKOORRO: Maxay ka dhigan tahay goolashii uu ka dhaliyay Eduardo Vargas xulka Japan?? – Gool FM
(Brazil) 18 Juunyo 2019. Weeraryahanka xulka qaranka Chile Eduardo Vargas ayaa sameeyay rikoorro cajiib ah inta lagu gudi jiray kulankii ay guusha ka gaareen subaxnimadan dhigooda Japan, kulooda koowaad Group-ka C ee Copa America.
Eduardo Vargas ayaa ku guuleystay in kulankan uu ka dhaliyo 2 gool, wuxuuna ku hogaamiyay xulkiisa qaranka Chile inay guul muhiim ah kaga gaaraan Japan 4-0, iyagoo haatan hogaaminaya Group-ka C, waxayna kala siman yihiin Uruguay.
Sida laga soo xigtay Shabakada caanka ah “Opta” ee looga haray tirakoobyada weeraryahanka xulka qaranka Chile ee Eduardo Vargas ayaa noqday laacibka goolasha ugu badan ka dhaliyay Copa America wuxuuna gaaray 12 gool, isagoo ka sara maray xiddiga xulka Peru ee Paolo Guerrero oo tartanka kasoo dhaliyay 11 gool.
Shabakada ayaa waxay intaas ku sii dartay in Eduardo Vargas uu sidoo kale gaaray goolkiisii 38-aad ee xulka qaranka Chile ee ah dhamaan tartamada kala duwan, wuxuuna rikoorkan kaga sara maray halyeeyga Marcelo Salas oo 37 gool heysta.
Eduardo Vargas waxaa haatan kaga horeeya liiska xiddigaha ugu goolasha badan taariikhda xulka qaranka Chile saaxiibkiis Alexis Sánchez oo soo dhaliyay 42 gool.
RASMI: Real Madrid oo warbaahinta u soo bandhigtay xiddigeeda cusub ee Rodrygo Goes... + SAWIRRO